မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးက ရှေးဟောင်းကြေးရုပ်ကြီးတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း - Barnyar Barnyar
မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးက ရှေးဟောင်းကြေးရုပ်ကြီးတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း
မဟာမုနိဘုရားပရဝဏ်ရှိ ကြေးရုပ်ကြီးများ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးမြို့၊ မဟာမုနိရုပ်ပွားရှင်တော်မြတ် တည်ရှိရာ မဟာရာမ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်. ကြေးရုပ်ကြီးများမှာ ခေါင်းသုံးလုံးနှင့် ဧရာဝဏ်ဆင်ရုပ် (၁) ၊ နတ်ရုပ် (၂) ၊ ခေါင်း (၁)ခု ပြုတ်နေသော ခြင်္သေ့ကိုယ်နှင့်ခေါင်း၊ ခေါင်းမရှိသော ခြင်္သေ့ကိုယ်ထည်တစ်ခုတို့ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကို ထိုင်းလူမျိုးများက ‘ဒေဝဂဿရူပ နတ်ရုပ်’ ဟု ဆိုကြလေသည်။
ဓညဝတီ ရခိုင်ပြည်မှ အိမ်ရှေ့မင်းသိမ်းယူလာသော ကြေးရုပ်ကြီးများသည် မူလက ကမ္ဘာဇတိုင်း အန်ကာမြို့မှ ဆောင်ယူလာခြင်းဖြစ်၍ ဟံသာဝတီဘုရင့်နောင် ကျော်ထင်အနော်ရထာမင်း ယိုးဒယားကို အောင်နိုင်သောအခါ သက္ကရာဇ် ၉၂၅ ခု ၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် (၂)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယူဆောင်ခဲ့ရာ ဟံသာဝတီသို့ သက္ကရာဇ် ၉၂၆ ခု ၊ နယုန်လဆန်း (၆)ရက်နေ့တွင် ရောက်သည်။ (အချို့မှတ်တမ်းများ ၌ ကြေးရုပ်များကို ၉၂၃ ခုနှစ်တွင် လင်းဇင်းမှ ယူဆောင်လာကြောင်း တွေ့ရ၏။)
သက္ကရာဇ် ၉၆၀ ၌ သံသာဝတိပျက်သောအခါ ဟံသာဝတီဘုရင်သည် တောင်ငူ၌ ကွက်မျက်ခံရသည်။ ဟံသာဝတီဘုရင်၏ သမီးတော် ခင်မနှောင်းနှင့်တကွ ဆင်ဖြူတစ်စီး၊ အထူးထူးသော ပစ္စည်းများကို ရခိုင်မင်းတပ်သို့ ပို့ရသည်။ ထိုစဉ်က ယိုးဒယားမှ ယူဆောင်လာသော ကြေးရုပ်များကို ဟံသာဝတီမှတဆင့် တောင်ငူမင်းနှင့်တကွ ရခိုင်မင်းတို့ထံသို့ ဆောင်ယူသွားကြသည်။
ဟံသာဝတီသို့ ယိုးဒယားဘုရင် ဗြနုရာဇ် စစ်ချီစဉ်အခါကပင် ရခိုင်မင်းရာဇာသည် တောင်ငူမြန်မာတို့ဘက်မှ စစ်ကူရာ အောင်နိုင်လျှင် ဟံသာဝတီမှ သံပစ္စည်းဟူသမျှကိုလည်း ရခိုင်သို့ ယူဆောင်သွားလေသည်။ ထိုစဉ်က ကြေးရုပ်ကြီးများနှင့်အတူ အမြောက် (၁၀ဝ) ကိုလည်း ရခိုင်သို့ ယူဆောင်သွားသည်။
ရခိုင်ပြည်မှ အမရပူရသို့ ပင့်ဆောင်လာသော မဟာမုနိရုပ်ပွားရှင်တော်မြတ်နှင့်အတူ ကြေးရုပ်ပေါင်း (၃၀)ပါသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ကြေးရုပ်ကြီးများနှင့် အမြောက်ကြီး (၂၀ဝ၀)ကို မော်တဂင်ရစ် ရေကြောင်း ပင်လယ်လမ်းဖြင့် ယူဆောင်ခဲ့သည်။ အမရပူရသို့ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်ကို ပင့်ဆောင်ရာ ကြေးရုပ်ကြီး (၃၀)ကို မဟာမုနိ၏ အရှေ့တောင်ယွန်း ယင်းတောင်မြို့စား မိဖုရားသီရိသုစန္ဒာဒေဝီ ဆောက်လုပ်သော သိမ်တော်ကြီးအတွင်း၌ ပထမဦးစွာ ထားလေသည်။ ထိုကြေးရုပ်များတွင် ဧရာဝဏ် ဆင်ရုပ်နှင့် လူရုပ်များပါသည်။
ကမ္ဘာဇ အန်ကာမြို့ တည်ရှိစဉ်က ဧရာဝဏ် ဆင်မင်း၏ ပြဿဒ်နန်းတော် သီးသန့်ရှိသည်။ ဧရာဝဏ်ဆင်သည် ဦးခေါင်းသုံးခုပါသည်။ လူရုပ်ကြီးများကို ယိုးဒယားမင်း ပြသားဓိပတိနှင့် မိဖုရားကြီး၏အရုပ်ဟူ၍ ဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။ အချို့ကလည်း ယိုးဒယားနတ်ရုပ်ဟုဆိုသည်။ ယခုတွေ့ရသော ကြေးရုပ်နှစ်ရုပ်သည် ယောက်ျား ပုံတူများဖြစ်၍ လူရုပ်တစ်ခုမှာ ထက်အောက်ဆင့်၍ ဆက်ထားသော အပေါ်ပိုင်းလူနှင့် အောက်ပိုင်းလူနှစ်ခုကို တစ်ခုပြုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ရှေးကထက်က အရုပ်ပေါင်း (၃၀)ဟုဆိုသည်။ ရာမမင်း၊ ဟာနုမာန်ကျောက်ရုပ်၊ အလပ္ပါယ် မြွေသမား ရုပ်များပါကြောင်း ဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည်မှ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် ပင့်ဆောင်လာပြီးနောက် ကြေးရုပ်ကြီးများကို ပထမဦးစွာ သိမ်(နီ)ကြီးခေါ် အာနန္ဒာဘုရားပြဿဒ် မဟာရာမ်အတွင်း အင်္ဂါထောင့်၌ ထားသည်။ ပုဂံမင်း လက်ထက်မတိုင်မီ ကာလ မူလသိမ်ပြဿဒ်ကြီး ပြိုကျရာတွင် ကြေးရုပ်များ ထိခိုက်၍ အချို့ကျိုးပဲ့ပျက်စီးသည်ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့သုတေသီများ စာတမ်အရ ကြေးရုပ်များသည် မူလက ကမ္ဘာဇတိုင်းမှဖြစ်၍ ယိုးဒယား (ထိုင်း)တို့က အယုဒ္ဓယသို့ ဆောင်ယူလာကြောင်း ထိုမှ မြန်မာမင်းတို့က ဟံသာဝတီသို့ ဆောင်ယူလာကြောင်း ထိုမှ မြန်မာမင်းတို့က ဟံသာဝတီသို့ ဆောင်ယူပြီး ဟံသာဝတီပျက်သောအခါမှ တောင်ငူမင်းနှင့် ရခိုင်မင်းတို့က ဝေခွဲယူကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၂၆၅ခုနှစ်ခန့်က ကြေးရုပ်များကို ပြုပြင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းအရသိရသည်။
ယခုအခါ ကြေးရုပ်များကို မဟာမုနိဘုရားပရဝဏ်၏ အနောက်မြောက်ဘက် အုတ်တိုက်ခန်း၌ ထားရှိသည်။ အစဉ်အလာအတိုင်း (၉၆)ပါး ရောဂါများ ပျောက်ကင်းရန် ကြေးရုပ်များကို ပွတ်သပ်ပြီး ဆုတောင်းကြသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၁၇ ခုနှစ်၌ မန္တလေးမြို့ ဝါးတန်းရပ် ဒေါ်ဖွားအို ၊ သား ဦးထောင်လောင် ဘဏ္ဍာတော်ထိန်းဖြစ်စဉ်က အုတ်တိုက်အလျား (၂၇)ပေ ၊ အနံ (၁၂) ပေအတွင်း ကြေးရုပ်ကြီးများကို လုံခြုံစွာ ထားလေသည်။
Via : မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း
Credit: Myanmar Wikipedia
မန်တလေး မဟာမွတျမုနိဘုရားကွီးက ရှေးဟောငျးကွေးရုပျကွီးတှရေဲ့ သမိုငျးကွောငျး
မဟာမုနိဘုရားပရဝဏျရှိ ကွေးရုပျကွီးမြား သညျ မွနျမာနိုငျငံ၊ မန်တလေးမွို့၊ မဟာမုနိရုပျပှားရှငျတျောမွတျ တညျရှိရာ မဟာရာမျအတှငျးတှငျ တညျရှိသညျ. ကွေးရုပျကွီးမြားမှာ ခေါငျးသုံးလုံးနှငျ့ ဧရာဝဏျဆငျရုပျ (၁) ၊ နတျရုပျ (၂) ၊ ခေါငျး (၁)ခု ပွုတျနသေော ခွင်ျသကေို့ယျနှငျ့ခေါငျး၊ ခေါငျးမရှိသော ခွင်ျသကေို့ယျထညျတဈခုတို့ဖွဈသညျ။ ယငျးတို့ကို ထိုငျးလူမြိုးမြားက ‘ဒဝေဂဿရူပ နတျရုပျ’ ဟု ဆိုကွလသေညျ။
ဓညဝတီ ရခိုငျပွညျမှ အိမျရှမေ့ငျးသိမျးယူလာသော ကွေးရုပျကွီးမြားသညျ မူလက ကမ်ဘာဇတိုငျး အနျကာမွို့မှ ဆောငျယူလာခွငျးဖွဈ၍ ဟံသာဝတီဘုရငျ့နောငျ ကြျောထငျအနျောရထာမငျး ယိုးဒယားကို အောငျနိုငျသောအခါ သက်ကရာဇျ ၉၂၅ ခု ၊ တနျခူးလပွညျ့ကြျော (၂)ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံသို့ ယူဆောငျခဲ့ရာ ဟံသာဝတီသို့ သက်ကရာဇျ ၉၂၆ ခု ၊ နယုနျလဆနျး (၆)ရကျနတှေ့ငျ ရောကျသညျ။ (အခြို့မှတျတမျးမြား ၌ ကွေးရုပျမြားကို ၉၂၃ ခုနှဈတှငျ လငျးဇငျးမှ ယူဆောငျလာကွောငျး တှရေ့၏။)
သက်ကရာဇျ ၉၆၀ ၌ သံသာဝတိပကျြသောအခါ ဟံသာဝတီဘုရငျသညျ တောငျငူ၌ ကှကျမကျြခံရသညျ။ ဟံသာဝတီဘုရငျ၏ သမီးတျော ခငျမနှောငျးနှငျ့တကှ ဆငျဖွူတဈစီး၊ အထူးထူးသော ပစ်စညျးမြားကို ရခိုငျမငျးတပျသို့ ပို့ရသညျ။ ထိုစဉျက ယိုးဒယားမှ ယူဆောငျလာသော ကွေးရုပျမြားကို ဟံသာဝတီမှတဆငျ့ တောငျငူမငျးနှငျ့တကှ ရခိုငျမငျးတို့ထံသို့ ဆောငျယူသှားကွသညျ။
ဟံသာဝတီသို့ ယိုးဒယားဘုရငျ ဗွနုရာဇျ စဈခြီစဉျအခါကပငျ ရခိုငျမငျးရာဇာသညျ တောငျငူမွနျမာတို့ဘကျမှ စဈကူရာ အောငျနိုငျလြှငျ ဟံသာဝတီမှ သံပစ်စညျးဟူသမြှကိုလညျး ရခိုငျသို့ ယူဆောငျသှားလသေညျ။ ထိုစဉျက ကွေးရုပျကွီးမြားနှငျ့အတူ အမွောကျ (၁၀ဝ) ကိုလညျး ရခိုငျသို့ ယူဆောငျသှားသညျ။
ရခိုငျပွညျမှ အမရပူရသို့ ပငျ့ဆောငျလာသော မဟာမုနိရုပျပှားရှငျတျောမွတျနှငျ့အတူ ကွေးရုပျပေါငျး (၃၀)ပါသညျဟု ဆိုလသေညျ။ ကွေးရုပျကွီးမြားနှငျ့ အမွောကျကွီး (၂၀ဝဝ)ကို မျောတဂငျရဈ ရကွေောငျး ပငျလယျလမျးဖွငျ့ ယူဆောငျခဲ့သညျ။ အမရပူရသို့ မဟာမုနိရုပျရှငျတျောကို ပငျ့ဆောငျရာ ကွေးရုပျကွီး (၃၀)ကို မဟာမုနိ၏ အရှတေ့ောငျယှနျး ယငျးတောငျမွို့စား မိဖုရားသီရိသုစန်ဒာဒဝေီ ဆောကျလုပျသော သိမျတျောကွီးအတှငျး၌ ပထမဦးစှာ ထားလသေညျ။ ထိုကွေးရုပျမြားတှငျ ဧရာဝဏျ ဆငျရုပျနှငျ့ လူရုပျမြားပါသညျ။
ကမ်ဘာဇ အနျကာမွို့ တညျရှိစဉျက ဧရာဝဏျ ဆငျမငျး၏ ပွဿဒျနနျးတျော သီးသနျ့ရှိသညျ။ ဧရာဝဏျဆငျသညျ ဦးခေါငျးသုံးခုပါသညျ။ လူရုပျကွီးမြားကို ယိုးဒယားမငျး ပွသားဓိပတိနှငျ့ မိဖုရားကွီး၏အရုပျဟူ၍ ဆိုစမှတျပွုကွသညျ။ အခြို့ကလညျး ယိုးဒယားနတျရုပျဟုဆိုသညျ။ ယခုတှရေ့သော ကွေးရုပျနှဈရုပျသညျ ယောကျြား ပုံတူမြားဖွဈ၍ လူရုပျတဈခုမှာ ထကျအောကျဆငျ့၍ ဆကျထားသော အပျေါပိုငျးလူနှငျ့ အောကျပိုငျးလူနှဈခုကို တဈခုပွုထားသညျကို တှရေ့သညျ။
ရှေးကထကျက အရုပျပေါငျး (၃၀)ဟုဆိုသညျ။ ရာမမငျး၊ ဟာနုမာနျကြောကျရုပျ၊ အလပ်ပါယျ မွှသေမား ရုပျမြားပါကွောငျး ဆိုသညျ။ ရခိုငျပွညျမှ မဟာမုနိရုပျရှငျတျော ပငျ့ဆောငျလာပွီးနောကျ ကွေးရုပျကွီးမြားကို ပထမဦးစှာ သိမျ(နီ)ကွီးချေါ အာနန်ဒာဘုရားပွဿဒျ မဟာရာမျအတှငျး အင်ျဂါထောငျ့၌ ထားသညျ။ ပုဂံမငျး လကျထကျမတိုငျမီ ကာလ မူလသိမျပွဿဒျကွီး ပွိုကရြာတှငျ ကွေးရုပျမြား ထိခိုကျ၍ အခြို့ကြိုးပဲ့ပကျြစီးသညျဟု ဆိုသညျ။
ကမ်ဘာ့သုတသေီမြား စာတမျအရ ကွေးရုပျမြားသညျ မူလက ကမ်ဘာဇတိုငျးမှဖွဈ၍ ယိုးဒယား (ထိုငျး)တို့က အယုဒ်ဓယသို့ ဆောငျယူလာကွောငျး ထိုမှ မွနျမာမငျးတို့က ဟံသာဝတီသို့ ဆောငျယူလာကွောငျး ထိုမှ မွနျမာမငျးတို့က ဟံသာဝတီသို့ ဆောငျယူပွီး ဟံသာဝတီပကျြသောအခါမှ တောငျငူမငျးနှငျ့ ရခိုငျမငျးတို့က ဝခှေဲယူကွခွငျး ဖွဈသညျ။ ၁၂၆၅ခုနှဈခနျ့က ကွေးရုပျမြားကို ပွုပွငျခဲ့ကွောငျး မှတျတမျးအရသိရသညျ။
ယခုအခါ ကွေးရုပျမြားကို မဟာမုနိဘုရားပရဝဏျ၏ အနောကျမွောကျဘကျ အုတျတိုကျခနျး၌ ထားရှိသညျ။ အစဉျအလာအတိုငျး (၉၆)ပါး ရောဂါမြား ပြောကျကငျးရနျ ကွေးရုပျမြားကို ပှတျသပျပွီး ဆုတောငျးကွသညျ။ သက်ကရာဇျ ၁၃၁၇ ခုနှဈ၌ မန်တလေးမွို့ ဝါးတနျးရပျ ဒျေါဖှားအို ၊ သား ဦးထောငျလောငျ ဘဏ်ဍာတျောထိနျးဖွဈစဉျက အုတျတိုကျအလြား (၂၇)ပေ ၊ အနံ (၁၂) ပအေတှငျး ကွေးရုပျကွီးမြားကို လုံခွုံစှာ ထားလသေညျ။
Via : မွနျမာ့စှယျစုံကမျြး
လူထွက်ခိုင်းရင် သတ်သေမယ်ပြောသော ကိုရင်လေးတစ်ပါးအကြောင်